ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा. प्रमोद जोशी « AayoMail
ट्रमा सेन्टरको निर्देशकमा डा. प्रमोद जोशी
2021,14 September, 7:11 pm
काठमाडौं – सरकारले ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी डा. प्रमोद जोशीलाई दिएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रको निर्देशकमा स्वास्थ्य शिक्षा समूहका सुनील शर्मालाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाल निर्देशक रहेका डा. सन्तोष पौडेललाई कान्ति बाल अस्पतालमा सरुवा गरिएको छ। तर, उनलाई काज भने ट्रमा सेन्टरमै राखिएको छ।
डा. जोशी हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ हुन्। उनी १० औं तहका कर्मचारी हुन्। यसअघिका डा‌. पौडेल पनि १० औं तहका कर्मचारी हुन्। केही समय अगाडि निर्देशक नियुक्तीमा ११ औं तहका कर्मचारी हुनुपर्ने ट्रमाका कर्मचारीले माग राखेका थिए।
संघमा दरवन्दी भएका शर्मालाई अघिल्लो सरकारले विभागमा सरुवा गरेको थियो। प्रदेशमा दरवन्दी रहेपछि केन्द्रको निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेकी राधिका थपलियालाई विभागमा सरुवा गरिएको छ।